Qarax Ismiidaamin dad badan lagu dilay oo ka dhacay magaalada Khost(Daawo Sawirada) | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Caalamka Qarax Ismiidaamin dad badan lagu dilay oo ka dhacay magaalada Khost(Daawo Sawirada)
Qarax Ismiidaamin dad badan lagu dilay oo ka dhacay magaalada Khost(Daawo Sawirada)
Wararka ka imaanaya magaalada Khost ee kutaala Bariga dalka Afgaanistan ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay qarax Ismiidaamin ah oo dhaliyay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu watay ruux is miidaamiye ah ayaa ku qarxay goob ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan booliiska dalka Afgaanistan, waxaa sidoo kale goobta uu qaraxu ka dhacay ku sugnaa dad shacab ah.
Inta la xaqiijiyay qaraxan ismiidaaminta ah waxaa ku dhintay 13-qof oo labo kamid ah la sheegay in ay caruur ahaayeen, waxaa sidoo kale qaraxan ku dhaawacmay tiro kale ay ku jiraan dad shacab ah oo ku sugna halka uu qaraxu ka dhacay.
Ma jirto wali cid sheegatay masuuliyada qaraxan ismiidaaminta ah ee ka dhacay dalka Afgaanistan, waxaana inta badan qaraxayda iyo weerarada dalkaasi ka dhaca masuuliyadooda sheegta Kooxaha Daalibaan iyo Daacish ee dalkaasi ka dagaalama.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 27-05-2017
Next articleAgaasimihii Guud ee Wasaaradda Haweenka oo digreeto Madaxweyne xilka looga qaaday